Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. “रणवीर निकै चुलबुले छन्” – Emountain TV
काठमाडौँ, २९ जेठ । रंगमञ्च हुँदै उदाएका कलाकार भोलाराज सापकोटा अभिनयमा उम्दा मानिन्छन् । पछिल्लो समय उनी रंगमञ्चमा कम, फिल्म अभिनयमा ज्यादा देखिन थालेका छन् । अझ अनुराग बसु निर्देशित ‘बर्फी’ मा नायक रणवीर कपुरको साथीका रूपमा देखिएपछि त स्वदेशी फिल्ममा उनको क्रेज हात्तै बढ्यो ।
यति बेला बायोपिक ‘सन्जु’ रिलिजको पूर्वाद्र्धमा अभिनेता सञ्जय दत्तका भिन्नभिन्न लुक्स र हाउभाउमा आफूलाई सिद्ध गरेर निकै चर्चामा आएका रणवीरसँग सात वर्षअघि नै भोलाराजले छोटो तर मीठो संगत गर्न पाए । नजिकबाट काम र स्वभाव नियाल्न पाएका रणवीरका बारेमा सम्झने क्रममा सापकोटा यसरी विगततिर फर्के । ‘बर्फी’ मा जोडिनुमा नै रमाइलो किस्सा छ । एक दिन प्रशान्त रसाइलीले मुम्बईबाट फोन गरे ।
हिन्दी फिल्ममा कलाकारका रूपमा अडिसन दिन बोलाउन रहेछ । पहिलो र दोस्रो अडिसनपछि फिल्म खेल्न छनोट भएँ । सुरुमा त आफैलाई विश्वास लागेको थिएन । तर जसै सुटिङ भयो, यस क्रममा रणवीर कपुरलाई नजिकबाट नियाल्न पाएँ । उनी रमाइला र ख्यालठट्टा मन पराउने रसिक मान्छे रहेछन् । ‘तिमीहरूको भाषामा छाडा शब्दको उच्चारण कसरी गर्ने गर्छौ ’ उनी यस्तै उटपटयाङ जिज्ञासा राख्दै जान्थे । मचाहिँ सकेसम्म चूप लागेर टार्न खोज्थें । उनी जिद्दी र चुलबुले पनि उत्तिकै छन् ।
एउटा कुरामा लागेपछि चुरो फेला नपार्दासम्म लाग्या लाग्यै गर्ने खालका । उनको अनुरोधको अगाडि मेरो केही सीप लाग्थेन । आखिर उनलाई केही छाडा शब्दको नेपाली उच्चारण सिकाउन करै लाग्यो । रमाइलो त के भयो भने उनी त्यही शब्द अरू साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै सेयर गर्न थाले । र, फिल्म सेटका अरू मान्छेले पनि जोक्सकै रूपमा ती शब्द बोल्न थाले । त्यो दिन सेटभरि हाँसो छाइरह्यो ।
रणवीरको अर्को बानी भनेको केटीहरूबारे ठट्टा गरिरहने पनि हो । ‘नेपालका केटीहरू कस्ता हुन्छन् ’ भन्दै रोमान्टिक मुडमा कुरा खोतल्न चाहन्थे उनी । मचाहिँ मुसुमुसु हाँसेरै टार्दिन्थें । रणवीरको त्यो चुलबुले पारा र मेरो निरीहता सम्झिँदा अहिले भित्रभित्रै हाँसो उठ्छ । सुटिङ क्रममा मुम्बई र दार्जिलिङमा उनीसँग संगालेका केही क्षण निकै मन छुने छन् । उनी मेरा नजिकका साथी भइसकेका थिए । हरेक रमाइला क्षणमा उनी सकभर मलाई सामेल गराउँथे । कला क्षेत्रको अनुभवको हिसाबले उनी मभन्दा परिपक्व थिए ।
तर, उनले कहिल्यै ममा त्यो भान पारेनन् । एक दिन सुटिङमै थियौं, हामी । कलाकार सौरभ शुक्लालाई देखेर म अलिक नर्भस भएछु । आफ्नो पालोमा फिल्मको डायलग बोल्न अकमकिएँ । सौरभले ‘इसको हटाओ’ भन्दै अलिक डर लाग्दै तरिकाले नै रियल डायलग मारे । मुटु ढक्क फुलेर आयो । अनुहार रात्तै भयो । मेरो यो हालत देखेर रणवीरले भने, ‘भोलाको म्युजिक लगादो फिर एक्टिङ करेगा ।’ नभन्दै गीत सुनेर एक छिनपछि टेकका लागि रेडी भएँ । आत्मविश्वास एक्कासि बढेर आयो । त्यति बेला रणवीर मेरो साइकोलजी बुझ्न सिपालु भइसकेका थिए ।
रणवीरको सरलपनले गर्दा पनि मलाई त्यो फिल्ममा आफ्नो अभिनय निर्धक्कसाथ तिखार्ने माहोल मिलेको जस्तो लाग्छ । उनको यो विशेषताबाट मलाई के लाग्यो भने कलाकारहरू सरल हुनुपर्दो रहेछ । सुटिङको पहिलो दिन पनि म डरले रातै भएको थिएँ । कुन कलाकारसँग खेल्दै छु भन्नेसमेत हेक्का थिएन । भुइँमा लडिरहेकी युवतीलाई हेर्ने तर, नउठाउने दृश्य थियो । मैले उसै गरें । एक छिनपछि ती युवती कहाँ गइन् पत्तो नै पाइनँ । एकै छिनको ब्रेक लिएर सेटमा आउँदै थिएँ, अग्ली, सुन्दर युवती अगाडि उभिइन् । ती प्रियंका चोपडा पो रहिछन् ।
उनीसँगको अनुभव भने हाई हेल्लोभन्दा अघि बढ्न सकेन । ‘बर्फी’ फिल्म नआउँदासम्म साथीहरूलाई मेरो अनुबन्धबारे विश्वास दिलाउनसमेत मुस्किल परेको थियो । धेरैले बलिउड फिल्म खेल्नुलाई ठूलो माने । अब यसको स्वभाव बदलिन्छ होला भन्दै अडकल काटे । तर, मलाई खासै केही लागेन । त्यो एउटा सानो अभिनय कर्म मात्रै थियो । म त सँधै उही हुँ, ‘भोला’ । कान्तिपुरबाट